यसरी सकियाे सरिता गिरीकाे राजनीतिक जीवन
नेपालकाे राष्ट्रियताविरूद्ध विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने सरिता गिरी अन्ततः सांसद र पार्टी सदस्य दुवै पदबाट निकालिएकी छन् । पार्टीको ह्वीप नमानेको र अटेरी गरेकाे भन्दै उनी अाबद्ध समाजवादी पार्टीले गिरीलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरेको हाे ।
मंगलबार बसेको समाजवादी पार्टीको बैठकले सरिता गिरीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेसँगै उनकाे सांसद पद पनि स्वतः गएकाे छ ।
नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सासहितको निसान छाप परिवर्तन गर्नका लागि भएको संविधान संशोधनमा गिरी एक्लैले मात्र पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेर यसकाे विराेध गरेकी थिइन् ।
पार्टी ह्वीप नै उल्लंघन गरेपछि समाजवादी पार्टीले पार्टी महासचिव रामसहायप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले गिरीलाई कारबाही गर्नका लागि पार्टीमा सिफारिस गरेको थियो ।
समाजवादी पार्टीका अनुसार संसद पदबाट र पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी गिरीलाई निस्कासन गरिएको हो । गत जेठ २७ गते निसान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनका लागि मतदान भएको थियो ।
काे हुन् सरिता गिरी ?
वेलावेला चर्का कुरा गरेर चर्चामा रहने नेत्री सरिता गिरी भारतीय मूलकी नेपाली हुन् । उनकाे माइती भारत विहार पर्छ । विहारकी गिरीले सिराहामा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आएकी हुन् र अंगीकृत नागरिकता लिँदै राजनीतिक अधिकार हात पारिन् ।
भारतीय राजनीतिक पृष्ठभूमि परिवारकी उनी विवाहअघि भारतमा राजनीतिक गतिविधिमै सक्रिय थिइन् । उनी विद्यार्थी जीवनबाटै भारतीय कंग्रेसमा आबद्ध थिइन् । पछि नेपालमा सदभावना पार्टी हुँदै हाल जनता समाजवादीसम्म पुग्न सफल भइन् ।
सरिता गिरीले विसं २०३६ सालमा लहानका इन्जिनियर लक्ष्मण गिरीसँग विवाह गरेकी थिइन् । विवाहको वर्षदिनपछि उनले नेपालको कानुनअनुसार ‘वैवाहिक अङ्गीकृत’ नागरिकता लिइन् । लगत्तै उनी नेपालमा राजनीतिक गतिविधिमा क्रियाशील हुन थालिन् । काँग्रेस नेता प्रदीप गिरीका नाताले भाइ पर्नेसँग उनले विवाह गरेकी थिइन् । तर उनले विवाह गरेका केही वर्षमै इन्जिनियर पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिन् र स्वतन्त्र बनिन् ।
सम्बन्ध विच्छेदपछि सरिता गिरीले कानुनअनुसार पतिबाट केही सम्पत्ति हात पारिन् । आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई अघि बढाइरहिन् । उनले गिरी थर पूर्वश्रीमान‍्बाट पाएकी हुन् र उनको अङ्गीकृत नागरिकता पूर्व श्रीमान्कै कारण पाएकी हुन् ।
उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले अहिले पनि भन्ने गर्छन् ‘सरिता गिरीले नेपालमा राजनीति गर्नकै लागि बिहे गरेर आएकी हुन्, उनले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि सम्बन्ध विच्छेद गरिन् ।’ उनका पूर्व पतिको भने अहिले निधन भइसकेको छ ।
विसं ०३१ सालमा गिरी इन्दिरा गान्धीको संकटकालविरुद्ध जयप्रकाश नारायणले आह्वान गरेको सम्पूर्ण क्रान्तिमा सहभागी भएकी थिइन् । त्यसबेला उनी स्कुले छात्रा थिइन् । उनले दक्षिण विहारको सानो सहर–चाइबासामा मिसनरी स्कुलमा पढेकी हुन् ।
नेपालमा ०४६ सालको आन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो । आम नागरिकले आफूलाई मन लागेको दलमा खुलेर समर्थन तथा सहभागी हुन पाउने अधिकार पाए । त्यससँगै सरिता गिरी पनि काँग्रेसमा अझै सक्रिय रूपमा लागिन् । त्यति नै बेला मधेसको समस्या लिएर आन्दोलनको नेतृव गर्दै आएका गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना पार्टी गठन गरे । सरिता गिरी पनि काँग्रेस छाडेर गजेन्द्रनारायण सिंह अध्यक्ष रहेको सद्भावना पार्टी प्रवेश गरिन् । र, मधेस केन्द्रित राजनीतिमा लागिन् ।
पछिल्लाे समय उनी समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य थिइन् । उनले नेपालको संविधान बमोजिम पटक–पटक शपथ खाएकी छिन्– ‘जुनसुकै परिस्थितिमा पनि देशको कुभलो चिताउने छैन’ भनेर । उनी नेपालको पहिलो संविधानसभामा पनि समानुपातिकतर्फबाट सदस्य थिइन् । त्यस बेला उनी सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) की नेतृ थिइन् । त्यस बखत पनि उनी विवादमुक्त हुन सकिनन् । उनले पहिलो संविधानसभामा प्रस्ताव गरेकी थिइन् – ‘म यो देशको नक्सा स्विकार गर्दिन, नेपाल भनिने यो देशको नाम फेर्नुपर्छ ।’
२०६८ सालमा तत्कालिन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । उनको मन्त्रीपरिषदमा सरिता गिरी श्रममन्त्री बनिन् । ‘पद अनुकूलको आचरण नदेखाएको’ तर ‘आर्थिक अनियमितता गरेको’ भनेर प्रधानमन्त्री भट्टराईले बिचमै बर्खास्त गरेका थिए । त्यसपछि उनी केही समय राजनीतिक रूपमा छायाँमा परिन् ।
२०७४ सालको चुनावमा उनी तत्कालीन समयमा उपेन्द्र यादवले नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी पार्टीबाट समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेकी हुन् । सोही सांसद पद अब उनले गुमाएकी छिन् । हाल समाजवादी पार्टी पनि जनता पार्टीसँग एकीकृत भएर जनता समाजवादी बनिसकेकाे छ ।
नेपलामा धेरैले नरूचाइएकी सरिता गिरीकाे पछिल्लाे निष्काशनसँगै उनकाे राजनीतिक जीवन लगभग समाप्त भएकाे छ । उमेरले समेत बुढ्याैली टेकेकी उनी अब कुन पार्टीमा जान्छिन् या राजनीति त्याग्छिन्, चासाेकाे विषय बनेकाे छ । तर पनि उनी अबकाे अर्काे चुनावबाट टिकट लिएर संसदमा अाउने सम्भावना क्षीण भइसकेकाे छ ।